कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटी? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटी?
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,जेठ २८
पछिल्लो समय सरकारी घोषणा तथा नेताको भाषणमा दोहरिने शब्द हो स्मार्ट सिटी। नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि घोषणा हुँदै आएको यसको अवधारणा भने सरकारले नै प्रष्ट पार्न सकेको छैन। स्मार्ट सिटीमा के कस्ता सुविधा तथा पूर्वाधार हुन्छन्? जिवनशैली कस्तो हुन्छ? यी र यस्तै विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले अध्ययनको नाममा प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन पिन गर्दै आएको छ।
त्यस्ता अध्ययनको निष्कर्ष के आयो भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिककरण गरिएको छैन।
सरकारले नगरेपनि राधानीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धि अध्यापन गराउँदै आएको सफ्टेरिका कलेजका विद्यार्थीहरुले भने स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ भनेर डेमो प्रदर्शनी गरेका छन्। कलेजकै भवनमा आजदेखि शुरु भएको स्मार्ट सिटी प्रदर्शनी ३ दिनसम्म चल्ने छ।
उक्त प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरुले स्मार्ट सिटीका विभिन्न पक्षको चित्रण गरेका छन्।
जिवनशैलीदेखि अध्ययनअध्यापनसम्मक कस्तो वातावरण र पूर्वाधारमा हुन्छ भनेर उनीहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। जस्तो यसमा यातायातका साधान कसरी चल्छन्, सडक,विमानस्थल जस्ता पूर्वधारको नमुनादेखि घरको भान्सा कस्तो हुन्छ भनेर प्रदर्शनीमा देखाइएको छ।
हरेक गतिविधि इन्टरनेटसँग जोडिने यस्तो सहरमा इन्टरनेट इकोसिस्टमबाट निर्देशित हुने प्रदर्शनीमा देखाइएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६, १९:०६:००